Ungayinyanga njani iarthritis ezinjeni ngamayeza amiselweyo - Izilwanyana Zasekhaya | Eyenkanga 2021
Imfundo Yezempilo, Impilo Iindaba Imidlalo Enzima Iindaba, Impilo Ukuphuma Ukuzonwabisa Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ekuhlaleni Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Iindaba Imidlalo Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi
Eyona >> Izilwanyana Zasekhaya >> Ungayinyanga njani iarthritis ezinjeni
Njengabanini babo, izinja zinokuphuhlisa i-arthritis njengoko zikhula. IArthritis kwizinja zichaphazela amalungu kunye nezicubu ezibangqongileyo, zibangela iintlungu zentshukumo eqhelekileyo. Njengoko izilwanyana zihlala ixesha elide, kuya kusiba yinto eqhelekileyo. Akukho lunyango kule meko, kodwa unokunceda umntwana wakho ukuba alawule iimpawu kwaye uhlale usebenza.
I-Osteoarthritis lolona hlobo luqhelekileyo lwe-arthritis ezinjeni. I-cartilage ekhusela ukuphela kwamathambo iyaphela njengenja yobudala. Oko kunokubangela ukungonwabi, ukudumba, okanye ukwehla kokuhamba kwesindululo.
Izinto ezinobungozi kwi-arthritis kwizinja
Nayiphi na inja inokukhulisa isifo samathambo ekwaluphaleni, kodwa izinto ezithile zenza ukuba kube lula ngakumbi. Imiba yomngcipheko ibandakanya ukwenzakala kwangaphambili kwamathambo, ufuzo kunye nokutyeba kakhulu.
Iimpawu zesifo samathambo ezinjeni
Iimpawu zesifo samathambo ezinjeni ziyafana nezo zinamava abantu. Nantsi imiqondiso onokuyichonga ukuba banokufumana iintlungu zesifo samathambo:
Ukungafuni ukudlala okanye ukunyuka izitepsi
Ukuqhwala, okanye ukuhamba ngokungqongqo
Kunzima ukuphakama okanye ukubeka phantsi
Ezinye izinja ziya kuzama ukuyifihla intlungu yazo ide ibe qatha. Kunokuba nzima ukubukela izinja ezisebenzayo zacotha kwaye zilahlekelwe ngumdla kwimisebenzi yesiqhelo. Iindaba ezimnandi kukuqhubela phambili kunyango lwezilwanyana kunokubonelela ngentlungu yokunceda kunye nokuxhasa izinja zamathambo.
Ukuba inja yakho iqala ukubonisa nayiphi na le miqondiso yesilumkiso, cwangcisa ixesha lokudibana nogqirha wakho wezilwanyana kuvavanyo olupheleleyo kunye nokwenza isicwangciso sonyango. Zininzi izinto onokukhetha kuzo ezinokunceda inja ene-arthritis, utsho uSara Ochoa, iDVM,isilwanyana esincinci kunye nezilwanyana ezingaqhelekanga eTexas kunye nomcebisi wezilwanyana we imvelaphi.com . Izinto ezifana nonyango lweentlungu, unyango lwe-laser ebandayo, [izongezo ezinje] nge-glucosamine kunye ne-chondroitin, kunye notyando oluthile olunokwenziwa ukunceda inja yakho.
Isifo samathambo asiyondawo inokunyangeka, kodwa iimpawu zinokuncitshiswa kakhulu ngolawulo lonyango. Kwizinja ezininzi oko kuya kuthetha ukusebenzisa iindlela ezininzi zonyango kubandakanya:
Rhoqo umsebenzi wobunzulu obuphantsi
Utshintsho kwizidlo ukugcina ubunzima bomzimba obunempilo
Izongezo zokutya ezinje nge-omega ezintathu fatty acids kunye ne-glucosamine chondroitin
Olunye unyango (njengonyango okanye unyango lwe-laser)
Ugqirha wezilwanyana uza kukwazi ukukunceda ulungelelanise iindlela zokulungiselela inja yakho ithathe ingqalelo yobudala, indlela yokuphila, kunye nezinye iimeko zonyango.
Ukhetho lonyango kunyango lwearthritis ezinjeni
Uninzi lwee-vets luya kukunika amayeza okugcina izinja ezine-arthritis zikhululekile kangangoko.
Uninzi lwamayeza e-arthritis asebenza ngokunciphisa ukudumba kunye / okanye iintlungu, uyachaza uJennifer Coates, iDVM,ugqirha wezilwanyana omncinci eColorado osebenza kwibhodi yeengcebiso Ubomi bezilwanyana zasekhaya namhlanje . Ezinye izongezo zesifo samathambo zinento efanayo, nangona isenzo esingenamandla kangako, kodwa zinokuphucula amalungu ngokudibanisa intlala kunye nokuveliswa kolwelo oluhlanganyelweyo.
La mayeza athomalalisa ukudumba ayafana ne-ibuprofen okanye iasprini onokuyifumana kwivenkile yeziyobisi yalapha. Kodwa, zenziwe ngokukodwa kwi-pooch yakho. Musa nje ukwabelana kwikhabhinethi yakho yeyeza. I-Advil okanye i-Aleve engaphezulu kwe-counter iyityhefu ezinjeni kwaye akufuneki inikwe. Izinketho ze-Doggy NSAID zibandakanya:
Xa ulawulwa yi-vet, unyango lwe-NSAID lunokuba lukhetho olukhuselekileyo lonyango.
Amaxesha amaninzi amayeza eentlungu ongezelelweyo angasetyenziswa ngokudibeneyo ne-NSAID. La mayeza aqhelekileyo amayeza eentlungu asetyenziswa ebantwini. Oku kunokubandakanya:
Xa ugqirha wezilwanyana emisela elinye lala mayeza, ungawathatha kwikhemesti apho ugcwalisa khona imigqaliselo yakho, kwaye usebenzise ikhadi lakho le-SingleCare ukugcina.
Ugqirha wezilwanyana uza kuchaza umyinge weyeza ngalinye elifanelekileyo kwinja yakho. Kuxhomekeke kunyango kunye nobukhulu benja yakho.
Ukuba une-arthritis, nayo, musa nje ukwabelana ngomyalelo wakho kunye nesilwanyana sakho. UGqr. Coates ulumkisa amayeza e-arthritis yabantu kunokuba yingozi kwizinja kwaye kunokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezimandla xa unikwa idosi engeyiyo, ngokudibeneyo namanye amayeza, okanye kwinja enezinye iingxaki zempilo.
Idosi inokwahluka kakhulu phakathi kwezinja, kwaye inani elingalunganga linokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezinobuzaza nezibalulekileyo kubandakanya izilonda zesisu kunye nokopha, ukugabha, ukonakala kwesibindi, ukonakala kwezintso, kunye nokuphazamiseka kwegazi, ucacisa uGqirha Coates.
Ukuthintela isifo samathambo ezinjeni
Njengempilo yakho, ukuthintela i-pooch yakho kubaluleke kakhulu. Ukuqinisekisa ukuba inja yakho ikhathalelwa rhoqo ngonyango lwezilwanyana, ukutya okufanelekileyo, inani elinempilo lokuzilolonga, kunye nokugcina ubunzima obusempilweni konke kuya kuxhasa, kuthintele okanye kunciphise ukukhula kwesifo samathambo njengenja yakho.
Qiniseka ukuba ufumana kwaye uphuhlise ubudlelwane kunye nodokotela wezilwanyana othembela kuye kunye nenja yakho ukuze ube nolwalamano lwangaphambili ukuba inja yakho iqala ukufumana iimpawu zesifo samathambo.
Yintoni ikhemesti yokudibanisa?
Inaliti ye-PRP: Ngaba unyango lweplatelet olutyebileyo luyasebenza?
I-tamiflu ithatha ixesha elingakanani ukukhaba
yintoni efana ne-generic ye-nexium
Ixabisa malini i-chantix ngeinshurensi
amanqanaba eswekile yegazi eliqhelekileyo emva kokutya itshathi
kufuneka uthathe iiprobiotic kunye ne-antibiotics ngaxeshanye